विदेशको एलपी ग्यास र रासायनिक मलका लागि मरिहत्ते, स्वदेशी अर्गानिक मल र बायोग्यास उपेक्षित| Corporate Nepal
विदेशको एलपी ग्यास र रासायनिक मलका लागि मरिहत्ते, स्वदेशी अर्गानिक मल र बायोग्यास उपेक्षित
असार ६, २०७९ सोमबार १४:०२
पर्यावरण विज्ञान र कार्बन व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरेका कुशल गुरुङ वातावरणमैत्री व्यवसायमा बढी संलग्न छन् । वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरुको प्रमुख भएर उन देशको विभिन्न ठाउँमा परामर्श दिने कामसमेत गर्छन् । विगत दुई वर्षदेखि पोखरामा गुरुङ र उनको समूहले २५ करोड रुपियाँ लगानीमा ‘गण्डकी ऊर्जा’ नामक कारखाना सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कारखानाले अर्गानिक मल (अन्नपूर्ण अर्गानिक मल) र ग्यास उत्पादन गर्दै आएको छ ।
पछिल्ला दिनमा किसानले मल नपाएको भनेर यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको छ । किसानहरु पनि त्यही रासायनिक मल नै कुरिरहेको देखिन्छ । केही दिनअघि धादिङको धार्केमा काठमाडौंतर्फ ल्याउँदै गरेको अवैध रासायनिक मलका ट्रक रोकेर स्थानीय किसानले मल खोसाखोस गरी लगे । यसरी मलमा हारालुछको अवस्था आउँदासमेत देशमै उत्पादित अर्गानिक मल भने बिकिराखेको छैन । न यसको महत्व बुझ्ने र बुझाउने काम भएको छ । रासायनिक मलका कारण हाम्रा खेतीयोग्य माटो बिग्रिँदै गएर रासायनिक मलबिना फल नलाग्ने बन्दै गएको छ । न उपभोक्ताले नै प्राङगारिक खेतीबाट उत्पादित वस्तु उपभोक्ता गर्न पाएका छन् ।
त्यस्तै, एलपी ग्यासको मूल्य आकाशिँदै गएको बेला बायो ग्यास उत्पादनको कुरा पनि बारम्बार उठ्ने गर्छ । शहर बजारमा फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यस्तो इन्धन उत्पादन र रासायनिक मलको कारखाना बनाउने कुरा चल्न थालेको बर्षौं भइसक्यो । तर सरकारले त्यो कुरा अघि बढाउन सकेको छैन् । तर त्यही काम गरिरहेका निजी लगानीमा स्थापित उद्योगीहरु भने सरकारबाट उपेक्षित छन् । उनीहरुलाई न सरकारको संरक्षण छ न प्रोत्साहन । यही पृष्टभूमिमा उद्योगी गुरुङसँग कर्पोरेट नेपालले गरेको कुराकानीः
‘गण्डकी ऊर्जा’ कस्तो उद्योग हो ?
पोखरामा जर्मनी प्रविधिबाट २५ करोड लगानीमा बनेको फ्याक्ट्री (कारखाना) हो । हाम्रो १० करोड, अन्य संस्थामा लगानी गर्ने कम्पनीको पाँच करोड, बैंकको कर्जा पाँच करोड र बाँकी पाँच करोड ४० लाख वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट अनुदान लिएर सञ्चालन गरेको कम्पनी हो । बोर्डमा पाँच जना छौं । ठूला साना लगानीकर्ता १७ जना छौं । यो सञ्चालनमा ल्याउन डेढ वर्षको समय लाग्यो । त्यतिबेला वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र विश्व बैंकले समर्थन गरेको हो । यो परियोजना लकडाउनभन्दा पाँच–छ महिना अगाडि सुरु भएको हो । प्रतिघरमा हुने गोबर ग्यास चार घनमिटरको हुन्छ तर हाम्रो ४५ टन कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने क्षमता भएको चार हजार घनमिटरको ठूलो परियोजना हो । यसबाट ४५ टन कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्न सकियो भने त्यहाँबाट दैनिक पाँच टन अर्गानिक मल र दुई सय एलपीजी सिलिण्डर बराबरको बायोग्यास उत्पादन हुन्छ ।
वार्षिक कति मल र ग्यास उत्पादन गरिराख्नु भएको छ ?
अहिले मल बार्षिक चार सय टन बिक्री भइराखेको छ । दुई वर्ष भयो, हरेक वर्षजस्तो चार–चार सय टन मात्र बिक्री भइराखेको छ । तर, १५ सय टन उत्पादन गर्ने हाम्रो क्षमता हो । बिक्री नभएकाले बाध्यतावस कम उत्पादन गरिराखेका छौं ।
तपाईंहरुको फ्याक्ट्रीबाट उत्पादित मल अहिले देशमा हाहाकार भइराखेको बेलामा पनि किन बिक्री हुन नसकेको ?
रासायनिक मलप्रति राज्यको मोह भएर हो । बजेटमा १३ अर्ब रुपियाँ रासायनिक मललाई छुट्याउनुको सट्टा बरु १२ अर्ब छुट्याएर एक अर्ब अर्गानिक मलमा छुट्याइदिनु पर्थ्यो जुन कुरा हामीले बारम्बार भनेका पनि थियौं । तर, सरकारले यो गर्न चाहेन । राज्यको लगानी अर्गानिक मलमा माग सिर्जना गर्ने हुनुपर्थ्यो जुन गरिदैन । अर्गानिक मल बेच्ने कम्पनी नेपालमा तीन–चार वटा मात्रै छन् । अर्गानिक मल बेच्ने कम्पनी नेपालमा औलामा गन्ने छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कम्पनी एक्लैले चार सय टन बेच्नु भनेको ठूलो कुरा हो । तर पनि हाम्रो आफ्नो क्षमता र देशको मागअनुसार धेरै सानो बिक्री क्षमता भयो । हाल देशमा रासायनिक मलको माग १० लाख टन भए पनि अहिलेको अवस्थाले गर्दा दुई लाख टनभन्दा बढी आयात गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । हाहाकार भएको यस्तो बेलामा राज्यले प्राङगारिक मलको नीति अपनाएर त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्नेतिर लागेको भए हामी पनि हौसिन्थ्यौ । हाम्रो माल बिक्न थालेपछि उत्पादन बढ्थ्यो । थप लगानी गरेर ठूला कारखाना खोल्थ्यौं । तर, बिडम्बना नै भन्नुपर्छ सरकारको नीतिका कारण देशमा मल हाहाकार हुँदा पनि देशमै उत्पादित अर्गानिक मल बिक्री भइराखेको अवस्था छैन् ।
सरकारले एक अर्ब अर्गानिक मललाई कुन रुपमा छुट्याउने भन्न खोज्नु भएको ?
अर्गानिक मल खरिद गर्नको लागि एक अर्ब छुट्याइदियो भने नेपालभरि अर्गानिक मलको कारखाना खुल्दै जान्छ । अहिले त ठ्याक्कै उल्टो छ । मल कारखाना खोल्नको लागि भनेरै पैसा दिने र मल चाहीँ नकिन्ने । अनि के काम त्यो ? झन डुब्ने काम भयो । बरु मल किन्नको लागि पैसा छुट्याइ किसानलाई अनुदान दियो भने व्यवसायीले मल कारखाना खोल्छन् । यसरी मलको ग्राहक भएपछि मात्र मलको कारखाना खुल्ने हो । भर्खर बजेट आएको छ । अर्गानिक मल, ग्यास उत्पादन गर्ने हाम्रो कम्पनी पनि गण्डकीमा छ । सरकारले अर्गानिक मलमा लगानी गर्दोरहेनछ । अर्गानिक मलमा बजेटै छैन । सरकारलाई निवेदन गर्दागर्दै पनि हाम्रो मल बिक्री भएको छैन् । तर प्रदेशले फेरि नयाँ मल कारखाना खोल्न अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मल खरिदको प्रावधानमा मनाङ र मुस्ताङलाई थोरै पैसा छुट्याइको छ । जबकी गण्डकीमा ११ वटा जिल्ला छन् । दुई वटा जिल्लालाई मात्रै अर्गानिक बनाउने गण्डकी सरकारको इच्छा रहेछ । त्यो दुईवटा जिल्लालाई उत्पादनको लागि भनेर अनुदान अलिअलि छुट्याएको छ र बढी बजेट चाहीँ फेरि अर्को मल कारखाना खोल्ने भनेर छुट्याइएको छ । जबकी हाम्रै मल बिक्री भएको छैन । हाम्रो मल बिक्यो भने न हामी आफै लगानी गरिहाल्छौं नि । हामीलाई मल कारखाना खोल्न अनुदान नै चाहिदैन थियो । यसरी मल बिक्री भइनराखेको अवस्थामा कारखाना खोल्न अनुदान दिनु रकम खेर फाल्नु मात्रै हो ।
तपाईंहरुको फ्याक्ट्रीद्वारा उत्पादित मल र ग्यास बिक्रीमा कस्ता चुनौतिको सामना गरिराख्नु परेको छ ?
लकडाउन बाहेकका चुनौती भनेको एलपीजी ग्यास र रासायनिक मलमा हुने सरकारको अनुदान यति धेरै रहेछ कि हामीले उत्पादन गर्ने मल र ग्यासले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने भयो । मलको क्षेत्र त अनुदानले घेरिने रहेछ । अनुदान जता गयो त्यतै जाने रहेछन् किसान । नेपाललाई रासायनिक मल वर्षेनी १० लाख टन जति चाहिन्छ । सरकारले मल खरिदलाई भनेर बजेटमा यो वर्ष झण्डै १५ अर्ब छुट्याएको छ । यसरी सरकारले वर्षेनी कहिले १३ त, कहिले ३० अर्ब छुट्याइराखेको हुन्छ । तर, विगत दुई वर्षमा रासायनिक मलको भाउ धेरै नै बढेको छ जसले गर्दा दुई लाख टनभन्दा बढी मल खरिद गर्ने अहिले स्थिति छैन । अझ त्यही दुई लाख टन पनि पाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो छ । भनेपछि आठ लाख टन त अझै पनि माग छ । त्यो मागलाई अर्गानिक मलबाट परिपूर्ति गर्ने सुवर्ण अवसर छ । हामीले दैनिक पाँच टन उत्पादन गर्ने भनेको झण्डै झण्डै वर्षमा १५ सय टनजति उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, हाम्रो माग नभएर चार सय टनभन्दा बढी बेच्नै सकिराखेका छैनौं । उता, कृषि सामग्री केन्द्रलगायतको ठाउँहरुमा रासायनिक मल किन्ने कृषकको भिड अर्थात् लाइन हुन्छ । तर, हामीले उत्पादन गरेको मल खोज्नै आउदैनन् ।
तपाईंहरुको मुख्य समस्या भनेको के हो र मूल्य कति राख्नु भएको ?
अहिले मुख्य समस्या भनेको मागको हो । माग नभएकाले हाम्रो उत्पादन धेरै कम भएको छ । अर्को समस्या भनेको कुहिने फोहोर छुट्याएर प्रयोग गर्ने हो । कुहिने फोहोर महानगरले राम्रोसँग छुट्याउँदैन । त्यसले गर्दा हामी शुद्ध कुहिने फोहोर खोज्दै हिड्नु पर्छ । त्यसैले बाध्य भएर नेपाल अधिराज्यको कुनाकाप्चामा अर्गानिक फोहोरः गाईको गोबर, कुखुराको सुली, उखु कारखानाबाट निस्किने फोहोर, बियर फ्याक्ट्रीबाट निस्कने मोर्चा आदि खोज्दै हिड्छौं ।
उत्पादन बढी मात्रामा भएकोले मूल्यमा अरुको दाँजोमा हाम्रो सस्तो छ । हामीले ठूलो मल (२५ र ४० केजीको बोराक) ३० रुपियाँ केजीमा बेचिराखेका छौं । तर हामीदेखि ग्राहकसम्म पुग्दा त्यो मल ३० रुपियाँभन्दा बढी पर्न जान्छ । नेपालमा सबभन्दा सस्तो मूल्य भनेको हाम्रै मल हो । ग्यास पनि एलपीजीको दरमा बेच्नुपर्छ । हाम्रो दर त धेरै बढी हुन्छ तर प्रतिस्पर्धाले गर्दा एलपीजीकै दरमा बाध्यताले बेच्छौं । सरकारले एलपीजी ग्यास प्रतिकिलो ७० देखि ८० रुपियाँ अनुदान दिइराखेको छ । घाटामा बेचिराखेको छ । २८ सय पर्ने सिलिण्डर ग्यास १८ सयमा बिक्री गरिएको छ । भनेपछि हजार रुपियाँ प्रति सिलिण्डर सरकारले घाटामा बेचिराखेको छ । त्यसले गर्दा हामीले पनि आफ्नो मूल्यमा बेच्न पाएका छैनौं । एलपीजीको दरमा बेचेन भने ग्राहकले किन्दैनन्, महङ्गो भनिदिन्छन् । त्यसैले हाम्रो ग्यास कम मात्रामा बिक्री भइराखेकोले उत्पादन पनि कम गरिराखेका छौं ।
पोखरा महानगरपालिकाका घरहरुबाट निस्कने फोहोरलाई मल बनाउन किन प्रयोग नगर्नु भएको ?
घरको फोहोरमा प्लाष्टिक, फलाम आदि दुनिया निस्किन्छ । त्यसलाई वर्गीकरण गरेर ल्यायो भने हुन्थ्यो । हाम्रो काम भनेको किन्ने मात्र हो । छुट्याएर कुहिने फोहोर मात्रै महानगरले एक ठाउँमा राख्यो भने त्यो किन्न तयार छौं । तर, त्यस्तो गर्ने कोही पनि देखिएन । अब हामी आफै गर्न गयो भने हामीलाई फोहोर उठाउनै दिदैनन् । किनकि फोहोर उठाउने मान्छेले त पैसा कमाउने रहेछ ।
तपाईंहरुले उत्पादन गरेको मल र ग्यासको बजार कहाँ कहाँ छ ?
हाम्रो आफ्नै ग्यासको सिलिण्डर गरुङ्गो भएकाले पोखरामा मात्रै छ । गरुङ्गो सिलिण्डरमा भरेर पठाउनुपर्ने भएकाले अन्य ठाउँमा पठाउन गाह्रो छ । मल भने नेपालको पूरै ठाउँमा छ र बिगमार्ट लगायतका ठाउँमा पनि मलहरु पाइन्छ । एलपीजी ग्यास सिलिण्डरको तौल १४–१५ केजीको हुन्छ होला । तर हाम्रो ८०–९० किलोको छ । ग्यासको मुख्य लक्षित ग्राहक भनेको रेष्टुरेन्ट, होटल, पाटी प्यालेसलगायत धेरै खपत गर्नेहरुले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ । सिलिण्डर हाम्रो आफ्नै लगानी हो । उहाँहरुले किन्नु पर्दैन् । हाम्रो दुई वटा सिलिण्डरको सेट हुन्छ । त्यसलाई चक्कामा हालेर धकेल्नु पर्छ । त्यो सेटको झण्डै झण्डै एक लाख रुपियाँभन्दा बढी पर्ने भएकाले ग्राहकले किन्दैनन् । ग्राहकले एलपीजी ग्यासको सिलिण्डर २५ सयमा पाउछन् भने हाम्रो किन्न कुरै भएन । हाम्रो ग्यास सिलिण्डरमा हामी आफैले खर्च व्यहोरेर ग्यास मात्रै एलपीजीकै दरमा बेचिराखेका छौं । यसरी ग्यास र सिलिण्डर गरी दुबैमा हामीलाई दोहोरो मार परेको छ ।
‘सिजी इलेक्ट्रोनिक्सको यसपछिको योजना भनेकै देशभर मिनि आउटलेटहरु खोल्ने हो’
‘गुणस्तरीय सामान उपयोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो, आयातमा कडाई ठिक होइन’
असार ३ बाट ललितपुरमा नयाँ र फरक शैली मेला सुरु हुने, स्वदेशी उत्पादन मात्रै राख्छौंः श्रेष्ठ
जेठ २७, २०७९ शुक्रबार
'चार सय प्रतिशत भन्सार दर बढ्नु भनेको विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो ?'
जेठ २५, २०७९ बुधबार
नेपालमा खेलेर पैसा कमाई हुने खेल भनेको फुटबल मात्रै होः एन्फा अध्यक्ष शेर्पा